M/weyne Faroole iyo waftigiisa oo la kulmay wasiirka arrimaha dibedda ee Yemen, kalana hadlay adkaynta xiriirka u dhexeeya labada ummadood. – Radio Daljir
M/weyne Faroole iyo waftigiisa oo la kulmay wasiirka arrimaha dibedda ee Yemen, kalana hadlay adkaynta xiriirka u dhexeeya labada ummadood.
Oktoobar 4, 2010 12:00 b 0
Sanca, OCt 04 – Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxman Maxamed Faroole ayaa 3-dii October kulan la qaatey Wasiirka Arrimaha Dibada dalka Yamen Dr. Abu Bakr Al-Qirbi Kulankaan ayaa ahaa mid lagaga hadley xiriirka dhow ee Puntland iyo dalka Yamen islamarkasna diirada lagu saarey sidii loo kordhin lahaa xiriirka soo jireenka ee Puntland iyo Yemen.
Madaxda labada dhinac ayaa ka hadley sidii Somaliya loogu soo dabaali lahaa nabad waarta dalka oo dhan. Yemen oo kamid ah wadamada ugu badan oo aay joogan qaxootiga Somaliyed, ayaa kamid ah wadamada aadka u daneeya dagnaashaha Somali. Waxa kaloo labada dhinac kawada hadleen sideey isaga kaashan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxaha mayalka adag, tahriibta, burcad badeedka iyo wadamada shisheeye oo xaalufka ku haya bada Yemen iyo Somalia u dhaxeeysa.
Waftiga Madaxweynaha Puntland ayaa maalintii Sabtida ku tukadey masjidka ugu dada weyn ee taariikhda Islamka ee Al-janad ee la dhisey xiligii Rasuulka Muxammed (scw); waxaa kale oo ay booqden meelo kale oo taarikhi ah.
Dawladda Puntland ayaa waxaa ka go’an iney xiriirka dhow la yeelato wadamada dariska la ah mandiqada.
Xafiiska saxaafada ee Madaxweynaha Puntland
Duqa magaalada Bossaso oo aan ka waraysanay kulan lagu gorfeeyey horumarinta magaaloooyinka Puntland oo Duqaydu ay ku yeesheen Garowe.